Ugu Weyn Ee Beetroot
Mangold waa dhirta biennial a biennial, qaybo ah dabocase guud, ka mid ah maqaarka subfamily ka soo amaranth qoyska. Qeybinta kala qaybinta waa dhulalka bartamaha iyo koonfurta ee Yurub. Waxaa jira noocyo farabadan oo ku kala duwan midabka maskaxda (cad, huruud ah, cagaar cagaaran iyo cagaar madow) iyo calaamadda caleemaha, taas oo noqon karta mid xariif ah iyo xataa.
Caadi ahaan, dadku shaki kuma jiro in dabocase sonkorta ay tahay wax qashin ah oo loo adeegsado warshadaha warshadaha, kaliya ganacsiga agabka waaweyn ama beeraha ayaa ku hawlan beerashada. Dhanka kale, tiknoolajiga beerista ee dabocase sonkorta waa mid aad u badan oo laga heli karo sariiraha beerta yaqaan ee milkiilaha kasta ee dhul beereed yar.
Sida loo xakameeyo xididada jiilaalka ee qaboojiyaha
Beetroot waa badeeco la kaydiyey muddo dheer, waxay ku taalaa qalabka wareegga sanadka oo idil, sidaas awgeed waxaa muuqata inaysan lahayn wax gaar ah oo u diyaarinaya jiilaalka. Laakiin haddii beergooyska ay kor u kacday, laakiin ma jirto maqnaansho kaydsi ah, waxba maaha in la isku dayo dalagga dalagga. Waxaa soo baxday in ay jiraan siyaabo badan oo looga shaqeeyo qalabkaas, sida ay yiraahdaan, "guriga".
Caleemaha qalajinta: faa'idooyinka iyo waxyeelada, hababka caanka ah, codsiga
Beetroot waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah khudaarta ugu caansan ee ku yaal Ukraine iyo kuwa ku dhow dibadda. Tani ma ahan wax la yaab leh, sababtoo ah khudradda cagaaran waxay hodan ku tahay fitamiinada iyo macdanta. Xayeysiinta qalajinta ayaa kuu oggolaanaya inaad dhowrto sifooyinka faa'iidada leh ee sheyga sannadka oo idil. Faa'iidooyinka habka goosashada Dadka ayaa muddo dheer ogaaday in haddii miro ama qudaar si fiican loo qalajiyey, waxay lahaan doontaa inta ugu badan ee maaddooyinka waxtarka leh.
Sida loo kariyo bislaada si degdeg ah oo dhadhan fiican leh
Beetroot waa wax aan ahayn mid aad u ballaadhan oo ku baahsan dhulkeenna, laakiin sidoo kale aad u faa'iido leh oo ay ku jirto maadada faytamiin sare leh, noocyada kala duwan ee walxaha raadadka iyo fiitamiinada (A, B, C), iyo sidoo kale asal organic iyo amino acids. Waxaa loo adeegsadaa sidii daaweyn loogu talagalay xannibaadda, waxay hagaajisaa nidaamka qanjirada iyo kelyaha, waxay faa'iido u leedahay cuntada iyo waxay lagama maarmaan u tahay haweenka uurka leh.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beetroot 2019